အဲဗာတနျပှဲ ၁း၃ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ အပွီး မှတ်မှတ်ရရ ပြောစရာ ကောကျနုတျခကျြ ၅ ခကျြ – Sports A2Z
အဲဗာတနျပှဲ ၁း၃ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ အပွီး မှတ်မှတ်ရရ ပြောစရာ ကောကျနုတျခကျြ ၅ ခကျြ
ဒီနညေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ ည ၇နာရီ၊ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၈ ရဲ့ စနနေပှေဲ့စဉျအနနေဲ့ အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ ယှဉျပွိုငျကစားသှားတဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ အဲဗာတနျတို့ပှဲမှာ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ခွစှေမျးပွမှုနဲ့အတူ ယူနိုကျတကျက ၃ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိပွီး နညျးပွထိုငျခုံလှုပျနတေဲ့ ဆိုးလျရှားအတှကျ အသကျရှူခြောငျခဲ့ရပါတယျ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ နဲ့ အဲဗာတနျပှဲအပွီး ထုတျနုတျမှတျသားစရာ ကောကျနုတျခကျြ ၅ ခကျြကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ပယျနယျတီမငျးသားလို့သာ သတျမှတျနကွေတာကို ခြိုးဖကျြပွပွီး သူရဲကောငျးဖွဈခဲ့တဲ့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ
သူက ပငျနယျတီမငျးသားလို့ ကြျောကွားနရောကနေ ယူနိုကျတကျအတှကျ ခပြေဂိုးကို ခြိနျသားကိုကျ ခေါငျးတိုကျသှငျးယူပွီး အနအေထားမြိုးစုံကနေ ဂိုးသှငျးယူနိုငျကွောငျး သကျသပွေခဲ့တယျ။ ခပြေဂိုးအပွီး ၇မိနဈအကွာမှာ သူ့ရဲ့ဖွတျတငျဘောကနတေဆငျ့ တိုကျရိုကျဂိုးဝငျသှားခဲ့လို့ ယူနိုကျတကျတို့ ဦးဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ ၉၅ မိနဈမှာ ကာဗာနီရဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဘဝ တာထှကျဂိုးဖွဈလာစဖေို့ပါ ဖနျတီးပေးသှားတာမို့ ဒီပှဲရဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမား ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
၂။ယူနိုကျတကျ၏ သရဲနီ စိတျကို မတှနျးလှနျနိုငျပဲ ပွနျမလာနိုငျသေးတဲ့ အဲဗာတနျ
ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီအစ လေးပှဲဆကျ ရာနှုနျးပွညျ့နိုငျပှဲနဲ့ တာထှကျခဲ့တဲ့ အဲဗာတနျဟာ အမှတျပေးဇယားကို ထိပျဆုံးက ဦးဆောငျဖူးတဲ့ အသငျးဖွဈသလို ကာရာဘောငျးဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျရောကျထားခဲ့တဲ့အထိ ခွစှေမျးတညျငွိမျခဲ့ဖူးတာပါ။ ယူနိုကျတကျကို ရှူံးခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ၃ ပှဲဆကျတိုကျ အမှတျမရရှိခဲ့ဘဲ အဆငျ့ ၅ နရောအထိ လြှောဆငျးသှားခဲ့ကို မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။
၃။ ရုနျးကနျနရေဆဲ မာစီယယျလျ
စပါးအသငျးကို ၆ ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ ရှူံးခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အနီကတျထိခဲ့တဲ့ မာစီယယျလျဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ၃ ပှဲဆကျ ပှဲပယျခံခဲ့ရပွီး ပွနျကစားနိုငျခဲ့တဲ့ ဒီပှဲစဉျမှာလညျး ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ ရရှိခဲ့တဲ့ အခှငျ့အရေးတခြို့ကို ဖွုနျးတီးပဈခဲ့ကာ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ပှဲထှကျတနရောအတှကျ ထိုကျတနျခွငျး မရှိသေးတဲ့ ရုနျးကနျနဆေဲ မာစီယယျလျကိုသာ မွငျတှခေဲ့ကွရပါတယျ။
၄။ ဗနျဒိုကျနဲ့ အဖွဈကို သငျခနျးစာ မယူသေးပဲ အမှတျမရှိသေးတဲ့ ပဈချဖို့ဒျ
ဗနျဒိုကျကို တရားလှနျပွဈဒဏျ ကြူးလှနျခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဗာတနျဂိုးသမား ပဈချဖို့ဒျဟာ ပှဲခြိနျ ဒုတိယပိုငျးမှာ အလားတူဖွဈရပျမြိုးအနနေဲ့ အဲဗာတနျဂိုးစညျးနားမှာ မကျဂှိုငျးယားကို ခပျကွမျးကွမျး တားဆီးဖကျြထုတျမှုမြိုး ပွုလုပျခဲ့ပွနျပွီး ကှငျးလယျဒိုငျက ပွဈဒဏျပေးခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျအဆငျ့ ဦးစားပေးဂိုးသမားအဖွဈ ထပျမံရှေးခယျြခံထားပွနျတဲ့ သူ့အနနေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ တုံ့ပွနျမှုပိုငျးဆိုငျရာ အားနညျးနဆေဲဖွဈလို့ လကျရှေးစငျအဆငျ့အတှကျ လုံလောကျရဲ့လားဆိုတာ မေးခှနျးထုတျခံရဖို့လညျး ရှိလာပါတယျ။
၅။သရဲနီ စိတျဓာတျနဲ့ ဖိအားတှကေနေ ရုနျးထှကျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ ဆိုးလျရှား ဘာလဲ ဘယျလဲ ?
ပထမပိုငျး ဦးဆောငျဂိုး ပေးထားရခြိနျမှာ တကမ်ဘာလုံးပျေါက ဖိအားတှကေို ဆိုးလျရှားတယောကျ ခံစားမိနမှော အမှနျပါပဲ။ နညျးပွထိုငျခုံလှုပျလာတဲ့အခြိနျ ဒီပှဲမှာပါ လကျဗလာနဲ့ အိမျပွနျခဲ့ရရငျဆိုတာ သူ့အတှကျတော့ ကွိုတှေးခငျြစရာ မကောငျးတဲ့ ကိစ်စပါ။
အဲဗာတနျကို ခပြေဂိုးပေးပွီးခြိနျမှာ နိုငျလိုစိတျပွနျရိုကျသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ဆိုးလျရှားရဲ့ အလှညျ့အပွောငျးကလညျး ပထမပိုငျးအတှငျးမှာ အခြိနျမီ ဦးဆောငျဂိုးရသှားခဲ့လို့ သကျသာသှားခဲ့ရတဲ့ အခွအေနပေါ။ အသငျးရလဒျတှတေညျငွိမျဖို့ ယုံကွညျလို့ မရသေးတဲ့ ဆိုးလျရှားတယောကျ ဘာတှဖေနျတီးပွလို့ ဘာတှဖွေဈလာဦးမလဲဆိုတဲ့ အခြိုးအကှအေ့ဆငျ့တှကေိုလညျး ပရိသတျတှကေ မကျြခညျြအပွတျမခံဘဲ ဂရုတစိုကျ စောငျ့ကွညျနကွေပါတယျ။
ဒီနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇နာရီ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၈ ရဲ့ စနေနေ့ပွဲစဉ်အနေနဲ့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ အဲဗာတန်တို့ပွဲမှာ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ခြေစွမ်းပြမှုနဲ့အတူ ယူနိုက်တက်က ၃ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိပြီး နည်းပြထိုင်ခုံလှုပ်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားအတွက် အသက်ရှူချောင်ခဲ့ရပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ အဲဗာတန်ပွဲအပြီး ထုတ်နုတ်မှတ်သားစရာ ကောက်နုတ်ချက် ၅ ချက်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ပယ်နယ်တီမင်းသားလို့သာ သတ်မှတ်နေကြတာကို ချိုးဖျက်ပြပြီး သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်
သူက ပင်နယ်တီမင်းသားလို့ ကျော်ကြားနေရာကနေ ယူနိုက်တက်အတွက် ချေပဂိုးကို ချိန်သားကိုက် ခေါင်းတိုက်သွင်းယူပြီး အနေအထားမျိုးစုံကနေ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့တယ်။ ချေပဂိုးအပြီး ၇မိနစ်အကြာမှာ သူ့ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေတဆင့် တိုက်ရိုက်ဂိုးဝင်သွားခဲ့လို့ ယူနိုက်တက်တို့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၉၅ မိနစ်မှာ ကာဗာနီရဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဘဝ တာထွက်ဂိုးဖြစ်လာစေဖို့ပါ ဖန်တီးပေးသွားတာမို့ ဒီပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂။ယူနိုက်တက်၏ သရဲနီ စိတ်ကို မတွန်းလှန်နိုင်ပဲ ပြန်မလာနိုင်သေးတဲ့ အဲဗာတန်
ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီအစ လေးပွဲဆက် ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲနဲ့ တာထွက်ခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်ဟာ အမှတ်ပေးဇယားကို ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်ဖူးတဲ့ အသင်းဖြစ်သလို ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်ထားခဲ့တဲ့အထိ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ခဲ့ဖူးတာပါ။ ယူနိုက်တက်ကို ရှူံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပရီးမီးယားလိဂ် ၃ ပွဲဆက်တိုက် အမှတ်မရရှိခဲ့ဘဲ အဆင့် ၅ နေရာအထိ လျှောဆင်းသွားခဲ့ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
၃။ ရုန်းကန်နေရဆဲ မာစီယယ်လ်
စပါးအသင်းကို ၆ ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ ရှူံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အနီကတ်ထိခဲ့တဲ့ မာစီယယ်လ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၃ ပွဲဆက် ပွဲပယ်ခံခဲ့ရပြီး ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ရရှိခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတချို့ကို ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့ကာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ပွဲထွက်တနေရာအတွက် ထိုက်တန်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ ရုန်းကန်နေဆဲ မာစီယယ်လ်ကိုသာ မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။
၄။ ဗန်ဒိုက်နဲ့ အဖြစ်ကို သင်ခန်းစာ မယူသေးပဲ အမှတ်မရှိသေးတဲ့ ပစ်ခ်ဖို့ဒ်
ဗန်ဒိုက်ကို တရားလွန်ပြစ်ဒဏ် ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဗာတန်ဂိုးသမား ပစ်ခ်ဖို့ဒ်ဟာ ပွဲချိန် ဒုတိယပိုင်းမှာ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးအနေနဲ့ အဲဗာတန်ဂိုးစည်းနားမှာ မက်ဂွိုင်းယားကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တားဆီးဖျက်ထုတ်မှုမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင်က ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အဆင့် ဦးစားပေးဂိုးသမားအဖြစ် ထပ်မံရွေးချယ်ခံထားပြန်တဲ့ သူ့အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ တုံ့ပြန်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းနေဆဲဖြစ်လို့ လက်ရွေးစင်အဆင့်အတွက် လုံလောက်ရဲ့လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ခံရဖို့လည်း ရှိလာပါတယ်။
၅။သရဲနီ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဖိအားတွေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား ဘာလဲ ဘယ်လဲ ?
ပထမပိုင်း ဦးဆောင်ဂိုး ပေးထားရချိန်မှာ တကမ္ဘာလုံးပေါ်က ဖိအားတွေကို ဆိုးလ်ရှားတယောက် ခံစားမိနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ နည်းပြထိုင်ခုံလှုပ်လာတဲ့အချိန် ဒီပွဲမှာပါ လက်ဗလာနဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ရရင်ဆိုတာ သူ့အတွက်တော့ ကြိုတွေးချင်စရာ မကောင်းတဲ့ ကိစ္စပါ။
အဲဗာတန်ကို ချေပဂိုးပေးပြီးချိန်မှာ နိုင်လိုစိတ်ပြန်ရိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အလှည့်အပြောင်းကလည်း ပထမပိုင်းအတွင်းမှာ အချိန်မီ ဦးဆောင်ဂိုးရသွားခဲ့လို့ သက်သာသွားခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အသင်းရလဒ်တွေတည်ငြိမ်ဖို့ ယုံကြည်လို့ မရသေးတဲ့ ဆိုးလ်ရှားတယောက် ဘာတွေဖန်တီးပြလို့ ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲဆိုတဲ့ အချိုးအကွေ့အဆင့်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက မျက်ချည်အပြတ်မခံဘဲ ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည်နေကြပါတယ်။
၈.၁၁.၂၀၂၀၊ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။
ဂှတျဒီဆနျပါ့ချမှာ ဖာနနျဒကျဈအစှမျး အံ့မခနျးနဲ့ ဆိုးလျရှားအတှကျ ဖိအားတှေ လြော့ကစြခေဲ့တဲ့ နိုငျပှဲ